Gaming Phone ဖန်တီးနေတဲ့ Nokia – DigitalTimes
Gaming Phone ဖန်တီးနေတဲ့ Nokia
Android HUBS Mobiles & Tablets NEWS Nokia
Gaming Smartphone တွေဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ခေတ်စားလာနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဖုန်း ကုမ္ပဏီတိုင်းဟာလည်း ဂိမ်း စမတ်ဖုန်းများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာကြပါတယ်။ Razer , Asus , Xiaomi , Huawei နဲ့ ZTE တို့က Mobile Gamer များအတွက် အထူး ဖန်တီးထားတဲ့ ဂိမ်း စမတ်ဖုန်းများကို မိတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ နိုကီယာကလည်း ဒီနယ်ပယ်ထဲကို ခြေချလာတော့မယ်လို့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ Nokia India က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် Channels များကနေ သူတို့ ဖန်တီးနေတဲ့ ဂိမ်း စမတ်ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Teaser Video တစ်ခုကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၁၀ စက္ကန့်ကြာ ဗီဒီယိုမှာ ဂိမ်း ပြကွက်အချို့ကို ပြသထားပါတယ်။ အဆုံးမှာ “ Are You Ready to #GameOn ? “ ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ စမတ်ဖုန်း ပုံတစ်ခုကို ပြသထားပါတယ်။ တွစ်တာမှ အဲဒီ ပို့စ်ရဲ့ စာသားနေရာမှာ “ Stay tuned foraphone you can #GameOn “ လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
နိုကီယာက ဆမ်ဆောင်းရဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပုံပေါ်ပါတယ်။ Galaxy Note9လို ဂိမ်း စွမ်းရည်များ ပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းကို နိုကီယာက ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ Note9ဟာ Fortnite ကို အစောဆုံး ကစားနိုင်တဲ့ ဖုန်း အဖြစ် ကြော်ညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလ အစောပိုင်းမှာ Nokia9( or Nokia 8.1 ) နဲ့ Nokia X7 ( ကမ္ဘာအဝန်းမှာ Nokia 7.1 Plus အမည်ဖြင့် ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ ) တို့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဖုန်းများထဲမှ ဘယ်ဖုန်းဟာ ဂိမ်း စမတ်ဖုန်း ဖြစ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
အကြမ်းခံတဲ့ Samsung Galaxy XCover 4s ကို ကြေညာ
ကမ္ဘာ့ရောင်းအား အကောင်းဆုံး ဖုန်း ကုမ္ပဏီဖြစ်လာဖို့ အချိန်နှောင့်နှေးသွားမယ်လို့ ပြောတဲ့ Huawei
တရုတ်နဲ့ ပြဿနာကြောင့် အိန္ဒိယက Apple iPhone ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်နား
NFC ဆိုတာဘာလဲ?? ဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲ??
SD720G နဲ့ 5,000mAh ဘက်ထရီ ပါတဲ့ Poco M2 Pro ကို ကြေညာ
Poco M2 Pro မိတ်ဆက်ပွဲကို ဒီမှာ ရှိုးလိုက်
Facebook ပို့စ်အဟောင်းများစွာကို တစ်ပြိုင်နက် ဖျက်နည်း
FCC ကို ရောက်လာတဲ့ Samsung Galaxy Note20+
OPPO Reno4 Pro ကို မကြာခင် အိန္ဒိယမှာ ကြေညာမည်
Vivo X50 Pro+ ကို တရုတ်မှာ ကြိုတင်ရောင်းချပေးနေပြီ